Akhriso: Madaxweynaha koofur Galbeed oo badal ku sameeyay Saraakiisha iyo ilaalada Madaxtooyada – XOGMAAL.COM
Akhriso: Madaxweynaha koofur Galbeed oo badal ku sameeyay Saraakiisha iyo ilaalada Madaxtooyada
Is badalkan uu sameeyay Shariif Xasan xili doorasho uu maamulkaasi galo ay ka dhiman tahay wax ka yar labaatan cisho ayaa lagu macneeyay in qaar ka mid ah hogaanada ciidankaasi ay taageero u muujiyeen musharaxiinta kursiga KGS kula tartami doonta Shariif Xasan.
By Soomaaliya	 On Oct 30, 2018
Shariif Xasan Sheekh Aadan Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa badal ku sameeyay saraakiisha iyo ciidankii ilaalada ka hayaymadaxtooyada maamulkiisa, waxaana ammaanka la wareegay ciidamo kale oo isaga daacad u ah.
Shariif Xasan iyo dadka kala shaqeeya dhinaca ammaanka kulan saqdii dhexe ee xalay ku dhexmaray madaxtooyada ayaa lagu go’aamiyay in shaqada laga badelo ciidankaasi iyo saraakiisha hogaamineysay.
Ciidamadii ilaalada ka hayay madaxtooyada Koonfur Galbeed iyo Saraakiishii la badalay ayaa la isugu geeyay xero ku taalla gudaha magaalada Baydhabo.
Erdogan oo furay wajiga hore ee mid kamid ah garoomada diyaaradaha caalamka ugu weyn